Anti-ukonakala umbhobho wentsimbi Factory | China Anti-ukonakala umbhobho yentsimbi Abavelisi, Suppliers
Uluhlu oluthathu lwe-PE anti-corrosion structure of the pipeline: umaleko wokuqala we-epoxy powder (FBE> 100um), umgca wesibini we-adhesive (AD) 170 ~ 250um, kunye nomgangatho wesithathu we-polyethylene (PE) 2.5 ~ 3.7mm.
Ngokwezibalo zamasebe achaphazelekayo, ngokubanzi, i-polyurethane insulated steel pipe inokunciphisa iindleko zeprojekthi malunga ne-25% (usebenzisa i-FRP njengoluhlu olukhuselayo) kunye ne-10% (usebenzisa i-polyethylene ephezulu njengomgangatho wokukhusela).
Anti corrosion kunye thermal insulation steel umbhobho umenzi
Ubushushu obuphezulu obunyulwe ngokuthe ngqo umbhobho wokugquma luhlobo lombhobho wokugquma owangcwatywa ngokuthe ngqo osebenza kakuhle, ukhuseleko nokuthembeka kunye neendleko zeprojekthi eziphantsi.
Umzi-mveliso wombhobho wentsimbi onganyangekiyo
Izinto ezisisiseko zombhobho wensimbi we-3PE we-anticorrosive ibandakanya umbhobho wensimbi ongenamthungo, umbhobho wentsimbi ojikelezayo kunye nombhobho wentsimbi othe ngqo.
Umbhobho wentsimbi onqatyisiweyo onomda omncinci usetyenziswa kakhulu
I-3PE ye-anti-corrosion kunye ne-thermal insulation iron pipe inokusebenza kakuhle kwe-thermal insulation, kwaye ilahleko yobushushu yi-25% kuphela yaloo mibhobho yendabuko.
Indawo yokuthengisa i-zinc ephezulu egqunywe umbhobho wentsimbi
Umbhobho wentsimbi wahlulwe waba ngumbhobho wentsimbi obandayo kunye nombhobho wentsimbi otshisiweyo. Umbhobho obandayo wentsimbi uvaliwe, kwaye le yokugqibela ikhuthazwa ngurhulumente ukuba isetyenziswe okwethutyana.
Ukumelana nokubola kombhobho wentsimbi ekhandiweyo eTshayina
Ngenxa yokuba umbhobho wentsimbi engenamthungo wediphu ushushu-dip uyigalvanized, umyinge wegalvanized uphezulu kakhulu. Umyinge wobunzima bomaleko owenziwe ngamazinki ungaphezulu kwama-microns angama-65, kwaye ukuxhathisa kwayo kokubola kwahluke kakhulu kunombhobho owenziwe ngamazinki ashushu.
Umenzi wemibhobho yentsimbi enganyangekiyo
Ipayipi yensimbi ye-Anticorrosive ibhekisela kumbhobho wensimbi ocutshungulwa yinkqubo ye-anticorrosive, enokuthi ithintele ngokufanelekileyo okanye icothise isiganeko esibangelwa yikhemikhali okanye i-electrochemical reaction ngexesha lokuthutha kunye nokusetyenziswa.